musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » US State department: Usaende kuCanada
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Yekupedzisira chipangamazano chekufamba yakapihwa neUS State department, yakakwidziridza Canada kusvika paLevel 3, iyo inoti 'Fungazve nezvekufamba'.
Vagari vemuUS vayambira kuti varege kuenda kuCanada.
Dhipatimendi reHurumende reUS rinokwidza danho rezano rekuCanada kuenda ku3.
Kufamba pakati peUS neCanada hakuna kukurudzirwa nekuda kwekuenderera kwe COVID-19 denda
United States Dhipatimendi reHurumende yakawedzera huwandu hwekuchengetera kwekufamba kwevaAmerican vanofamba kuenda kuCanada, ichikurudzira vagari vese vemuUS kuti vafungezve kuenda munyika pakati pechirwere che COVID-19 chiri kuenderera mberi.
The US State Department yakaburitsa chirevo ichiti yakanga yaisa patsva mazano ezvekufamba kubva padanho repiri - "chiito chakawedzera chenjedzo" - kusvika padanho rechitatu - "funga zvakare kufamba"- pazano reCDC, nekuda kwe" nhanho yepamusoro yeCOVID-19 muCanada. "
Dhipatimendi reUS State, pamwe ne Nzvimbo dzeUS dzekuDzivirira nekudzivirira Denda (CDC), akayambirawo nezvekuenda kuSwitzerland, pakati pedzimwe nyika nekuda kwekuwedzera kwenhamba dzezviitiko zvitsva zvehutachiona hweCOVID-19.
Mumazuva manomwe apfuura, vanopfuura zviuru makumi maviri nezviviri zvezviitiko zveCOVID-21,000 zvakataurwa muCanada. Panguva imwecheteyo, anopfuura mazana mapfumbamwe ezviuru ematare eCOVID-19 akanyorwa svondo rapfuura muUS, sekureva kweCenters for Disease Control and Prevention (CDC).
Tim Anderson anoti:
Nyamavhuvhu 31, 2021 pa14: 19
Hmmm. Iine apx 10% yehuwandu hweUS, isu zvakanyanya kana zvishoma tinoshanda pane gumi% mutemo wekufunga kwakawanda.
Kana Canada ine 21,000 kesi dzeCovid nyowani, iyo US inofanirwa kunge iine chete maapx 210,000 asi pane mazana mapfumbamwe.
Zvinonzwika senge maCanada havafanirwe kuenda kuUS>